Isu tinobvunzurudza Isabel Coixet nezve firimu rake The Library | Zvazvino Zvinyorwa
Kubvunzana naIsabel Coixet yemufirimu wake wazvino "Raibhurari" yakavakirwa pabhuku naPenelope Fitzgerald
Carmen Guillen | | Hurukuro
Nhasi, takave nemukana wekutaura naye Elizabeth Coixet, director director watakakwanisa kubvunzurudza pachiitiko chemufirimu wake wazvino "Chitoro chemabhuku", yakabva mubhuku ra Penelope Fitzgerald. Tinokusiya iwe nemashoko ake uye tinokuyeuchidza kuti iyi firimu huru inogona kuonwa mu cinema kubvira munaNovember apfuura, zuva rekutanga kwayo.
Mabhuku Nhau: Ndaswera Isabel, wakadii hako? Chekutanga pane zvese, ndinokutendai neiyi bvunzurudzo yeiyo yeActualidad Literatura webhusaiti, uye pachangu, ndikuudzei kuti ndiri kufara chaizvo kuve iye anozviita, sezvo ndanga ndichiteedzera basa rako kwemakore mazhinji uye mafirimu ako ndeimwe e mashoma kuti ini ndione imwe uyezve uye ndisinganete. Chii chakabata pfungwa dzako mubhuku "The Bookshop" ("Chitoro chemabhuku") yaPenelope Fitzgerald kuti nditi ndinoda kuita bhaisikopo reizvi?
Elizabeth Coixet: Zvakanaka, zvakaratidzika kwandiri sebhuku rinotyisa nihilism, yehungwaru hukuru, ine hunhu wandinozivisa hwakawanda naye, anova Florence Green, protagonist. Uye zvaitaridza kwandiri kuve nyaya kunyangwe hazvo yaive iri diki, yaive nerevhesheni yepasirose yandaifarira uye yaindifarira.
KU: Sezvo ini ndanga ndatoverenga uye sezvawataura iwe pachako, une fungidziro yemunhu mukuru weruzivo, Florence Green, kusvika padanho rekunzwa rakabatana kwazvo kwaari zvisati zvamboitika nechero mumwe munhu mumafirimu ako ... kupfuura? Chii chakafanana naFlorence Green uye chii chatinogona kuwana kubva pane zvaakasangana nazvo?
YEMukati: Eya, nekuti iye munhu asina mhosva, ane hunyengeri, anozvininipisa, anoenderana, anonyatsoda mabhuku ake uye anotenda kuti anofanira kuita chimwe chinhu muhupenyu hwake,… ndinomuda, pane zvinhu zvandinozvibatanidza nazvo. Semuenzaniso, munzvimbo yaunoenda kune anogadzira zvipfeko uye iye ari kuyedza sutu yako. Florence anoona kuti sutu yacho haina kumukodzera, asi zvakadaro anofanira kutsungirira magadzirisiro aanomuita "Bah!" Usazvidya moyo, hapana anozokuona ". Ini ndinoda kuratidza kuparara kudiki muhupenyu hwezuva nezuva, uko kune vanhu vazhinji vakabatikana kuita hupenyu husafadze kune vamwe ...
KU: Bhuku raPenelope rinotaura nezvechitoro chemabhuku chinogadzirwa pasina kana chinhu uye munzvimbo ine ruvengo. Tinogona kutaura kuti muchidimbu, zvinonyatsofanana neicho chokwadi chekuti nyika yevatengesi vemabhuku nemabhuku zvakawandisa parizvino zvinorarama ... eBook Izvo zvakapa kune hukuru hukuru kune izvo zvishoma zvinyorwa zvekushandisa kana, zvinopesana, iwe unofunga kuti zvikanganiso zvaive zvichitogadzirwa maererano nedzidzo, mabhuku emitengo, nezvimwewo izvo zvakakonzera kuti rudo rwemabhuku kuderere?
YEMukati: Mutengo wemabhuku unoita kunge wakapusa kwandiri, nekuti kana paine chinhu chimwe muSpain, zvitoro zvemabhuku nemaraibhurari kwaunogona kuverenga chero chaunoda. Ani naani asingaverenge nhasi nekuti haadi. Izvo zvisipo, chokwadika, zvinokurudzira vana kuvakurudzira kuverenga. Kuverenga kwakakosha: kunyora, kurarama humwe hupenyu, kunakidzwa, kudzidza, kutenderera pasirese ... Zvakakosha kuti ufarire mabhuku!
KU: Ndedzipi tsika uye mafungidziro atinogona kuwana zvakanyanya kubva mubhuku "Chitoro chemabhuku" kubva mufirimu rako, Isabel?
YEMukati: Zvakanaka, ini handizive ... Pamusoro pekugadzira iyo firimu, ndinofunga yakavhurika kune dzakawanda dudziro ... Ikoko muoni anoda kuipa uye chii chinoikurudzira.
KU: Chii chaunokurudzira kune vedu vaverengi veActualidad Literatura? Verenga bhuku raPenelope kutanga wozoona bhaisikopo rake kana zvinopesana?
YEMukati: (Chuckling) Ini handizive ... Ini ndinofunga kuti bhuku iri rakanaka, inyaya huru. Ini zvakare ndinofunga kuti iyo firimu yakapfava, neimwe nzira, ini ndachinja zvinhu zveinovhiya izvo zvaiita senge zvakaomarara kumuoni kumedza pachiratidziro ... Mupfungwa iyoyo, ndakaedza kuipfavisa uye ndopa mwenje pamusoro zvese, nekuti sekutaura kwandakambotaura, bhuku iri nderinonakidzaism. Ndakaedza kuti paive netariro.
KU: Uye kupinda mune mamwe mafirimu nyaya, yanga ichishanda sei nevatambi vechimiro chaBill Nighy naPatricia Clarkson?
YEMukati: Zvakanaka Patricia, iri firimu rechitatu kubvira pandiri kuita naye, saka ndinofara. Uye Bill mutambi anoshamisa, Bill anoshamisa ... Asi hei, protagonist yemufirimu uyu ndiEmily Mortimer, ari mune dzimwe ndege.
KU: Tichireva nezvake: Sei wafunga kurega Emily Mortimer atambe chinzvimbo chinotungamira chaFlorence mufirimu rako? Chii chakakutora iwe pamusoro pake kuti usarudze nezve rako basa mune ino firimu inoenderana, Isabel?
YEMukati: Iye mutambi wepamitambo uyo pese pandaimuona mumabhaisikopo uye akateedzana, ndaifunga kuti ane chimwe chinhu ... Pane chimwe chinhu ipapo chisina kumbomuita protagonist. Uye ini ndainzwa kuti zvinogona kubva mubhuku rino.
KU: Chekupedzisira, ini handidi kushandisa zvisina kufanira nguva yako uye nerupo: Dai iwe waifanira kuchengeta nyaya yeimwe yemafirimu ako, ingave iri ipi?
YEMukati: Ivo vese vane chimwe chinhu… ini ndinoda yega yega nezvikonzero zvakasiyana kwazvo. Ndine rudo rukuru kune "Zvinhu zvandisati ndambokuudza", nekuti yaive bhaisikopo rakagadzirwa senge iri kubva "Chitoro chemabhuku"Kubudikidza nehukobvu uye hutete, hapana ainzwisisa zvikonzero zvangu zvekuzviita, zvainge zvakaoma zvikuru… Asi panguva imwechete zvaive zvakanaka kuzvipedza nekupfeka sezvandaida.
KU: Uye chii chiri bhuku raanofarira raIsabel Coixet?
YEMukati: Mubvunzo uyu wakaoma… Kune mabhuku mazhinji. Pamwe Stendhal's "Dzvuku uye Dema" ibhuku randinogara ndichidzokera kwariri, rinoratidzika kunge rakanaka kwandiri.
Zvakare, ndinokutendai nenguva yenyu Isabel ... Ndinokutendai kubva kuchikwata chose chinotungamira Actualidad Literatura. Rombo rakanaka pane ino firimu uye dai rikabudirira kwazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Hurukuro » Kubvunzana naIsabel Coixet yemufirimu wake wazvino "Raibhurari" yakavakirwa pabhuku naPenelope Fitzgerald
Rosa Montero, akapihwa iyo National Literature Prize 2017